SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuIndia Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
DANIEL NAMIRIAM vakachata muna September 2000 ndokutanga kugara muguta reBarcelona, kuSpain. “Tairarama sezvinongoita vanhu vakawanda,” anodaro Daniel. “Mari yataiwana yaiita kuti tikwanise kudya mumaresitorendi akanaka, kushanyira dzimwe nyika uye kupfeka hembe dzemhando yepamusoro. Taigarawo tichiita basa rekuparidza.” Asi takabva tachinja.
Pane rimwe gungano rakaitwa muna 2006, Daniel akabatwa-batwa nehurukuro yaiva nemubvunzo waiti: “Tiri kuita zvose zvatinogona here kuti tibatsire vaya vari ‘kudzedzereka vachienda kunourayiwa’ kuti vapinde mumugwagwa unoenda kuupenyu husingaperi?” (Zvir. 24:11) Yakasimbisa kuti tine basa rekuzivisa mashoko eBhaibheri anopa upenyu. (Mab. 20:26, 27) Daniel anoti, “Ndakanzwa sekuti Jehovha ainge achitaura neni.” Hurukuro yacho yakatiwo kuwedzera basa reushumiri kunoita kuti uwedzere kufara. Daniel aiziva kuti ichi chaiva chokwadi. Miriam ainge atotanga kupayona uye akanga achifara nemakomborero aaiwana.
Daniel anoti: “Ndakagumisa kuti yakanga yava nguva yekuchinja mararamiro angu.” Uye ndizvo zvaakaita. Akaderedza maawa aaishanda, ndokutanga kupayona, uye akafunga nezvemufaro wavaizowana kana vakatamira kunodiwa vaparidzi veUmambo vakawanda.
KUOMERWA NEUPENYU​—UYE MASHOKO ANOFADZA
Muna May 2007, Daniel naMiriam vakasiya mabasa avo ndokutamira kuPanama, nyika yavakanga vamboshanyira. Ndima yavo itsva yaibatanidza zvitsuwa zvakati kuti zvemupurovhinzi yeBocas del Toro muCaribbean Sea, zvinogara vanhu vakawanda vechiNgabe. Daniel naMiriam vakafunga kuti nemari yavakanga vachengeta vaizokwanisa kugara muPanama kwemwedzi 8.
Vakafamba pazvitsuwa izvi nemabhoti nemabhasikoro. Vanonyatsoyeuka rwendo rwavo rwekutanga pavakachovha mabhasikoro kwemakiromita 32 vachipfuura nemumakomo, vachigochwa nezuva. Daniel akapotsa afenda nekuneta. Kunyange zvakadaro, pavaipfuura nemudzimba dzevanhu vechiNgabe vaigamuchirwa zvakanaka, kunyanya pavakanga vadzidza mamwe mashoko emutauro wevanhu vacho. Pasina nguva, vakanga vava kuitisa zvidzidzo zveBhaibheri 23.
Asi mari yavo payakapera, mufaro wavo wakaperawo. Daniel anoti: “Tiine misodzi pamatama, takatanga kufunga nezvekudzokera kuSpain. Tairwadziwa chaizvo nekusiya vadzidzi vedu veBhaibheri.” Asi pashure pemwedzi mumwe chete, vakagamuchira mashoko anofadza. Miriam anoti: “Takanzi tishumire semapiyona chaiwo. Takafara kuti taizokwanisa kuramba tiri mundima yacho.”
Pakachinja zvinhu musangano muna 2015, Daniel naMiriam vakanzi vashumire semapiyona enguva dzose. Vakaita sei? Vakavimba nezvinotaurwa pana Pisarema 37:5 kuti: “Isa nzira yako pana Jehovha, uvimbe naye, uye iye achazviita.” Vakawana basa rekuti vakwanise kuzviriritira vachipayona uye parizvino vari kushumira muungano iri muVeraguas, Panama.
Daniel anoti: “Tisati tabva kuSpain, taisava nechokwadi chekuti taizokwanisa here kurarama nezvishoma. Iye zvino ndizvo zvatiri kuita uye hapana zvinokosha zvatinoshaya.” Chii chinonyanya kuvafadza? Vanoti, “Kubatsira vanhu vanozvininipisa kuti vadzidze nezvaJehovha kunofadza chaizvo.”